VAKY BANTSILANA : Mandeha ila…manampontsampona | NewsMada
Nalaza tamin’ny vanim-potoana faha Mpanjaka ny momba an’i Beminaha, izay mpanompo mahafatra-po tao an-dapa. An-kevitry ny fidiran’ireo sampontsampon-javatra teto amin’ny Firenena rahateo no nahatonga ity tantara ity. Misy asa izay tsy hain’ny rehetra afa-tsy i Beminaha irery no nahavita azy. Narary anefa ny tongotr’ity mpanompo mahafatra-po ka nanapa-kevitra ny tao an-dapa fa omena kiraro izy. Nampihomehy sady nampalahelo ny fandehan’ny zava-niseho, ilan-kiraro ihany no natolotra nanaovany satria ny mpanompo tsy mahazo mikiraro. Talanjona ny ambanilanitra, amin’ny fahitana azy nanao ilan-kiraro, ka naharaikitra ilay ohabolana hoe : “mandeha ila ohatra ny kiraron’i Beminaha”…
Nandia tokoa io ohabolana io, nenti-nilaza zava-tsy feno tsy araka ny tokony ho izy. Nilaza, ohatra, ny filoham-pirenena tamin’ity nambarany ho “fotoam-bita” voalohany fa malalaka avokoa ny rehetra amin’ny fanehoan-kevitra…Saingy raha dinihina lalina, manila tahaka ny oran-dratsy ny zava-miseho, raha tsy hiresaka afa-tsy ny fidiran’ny mpanohitra haneho hevitra ao anatin’ny onjampeo na fahitalavi-panjakana. Maniry ohatra ny anana ireo fahitalavitra mpanohana fitondrana, andrasana kosa, ny mety hahazoan’ny avy amin’ny fanoherana ny fahazoan-dalana. Lohalaharana amin’izany ny Free Tv ary efa manomboka ny fanangonan-tsonia ny amin’ny fangatahana hanokafana izany. Eny am-pandrasana isika mahita ny atiny…
Raha voatohina anefa ny aty, marary ny afero. Anisan’ireo mbola maharary amin’ny fitantanana ny raharaham-pirenena, ny tsy fisian’ny fijoroan’ny fanoherana eny anivon’ny Antenimierampirenena eny hatramin’izao. Mihinan’ila toa rafi-dratsy ny fandehan’ny toe-draharaha. Verezina amin’ny pitsopitson-dalàna tsy hita fiafarana ka lany eo am-pitakiana ireo heverina ho mpanohitra rehetra. Manantena tsy misy ny sarotra, rey olona, fa ny mamoy mora foana. Mandeha ila manampontsampona ka orin-tsaina sy fara fahoriana ireo sasany avy amin’ny mpanohitra te ho ara-dalàna. Efa tonga amin’ny tanjona iriny rahateo ny mpitondra ka mionon-dratsy tsy feno ka handritra ny faribodiny?
Matevin’ila toa sorobilana ary masak’ila toa ramanonaka ny fijerena ny fiainam-bahoaka. Dradradradraina fa efa mipaka hatrany ifotony, hono, ny fampandrosoana. Vary tokoa angaha no naketsa ka tsiparifary no vaky vony. Isika rehetra samy mahalala fa tsy mitsaha-miakatra ny vidim-bary. Ary hatramin’izay mbola naha tany ny tany, tsy mbola nisy vidim-bary lafobe tahaka izao fitondrana izao. Etsy andaniny, miakatra isam-bolana ny vidin-tsolika, ny karama sy ny sandam-bola, tsy mitsaha-mitotongana. Mbola be fihetsiketsehana ihany ny sasany milaza fa hifampizara vina indray. Hanao ronono an-tavy? Fiainan-ko ela tokoa ny filalaovana politika ho an’ny sasany ka tsy ho araky ny tongo-bahoaka. Mandeha ila manampontsampona ny fitsinjovana ny fiainan’ny valalabemandry…Moa va tsy lelany fotsiny tahaka ny bangaridana, fa ny asa tsy misy vita…manampontsampona.